I-Ministries ye-Intanethi-I-Blog Blog
Icawa yeTestamente eNtsha
Asiyikho inkolo kwaye asinayo ikomkhulu eliphakathi okanye umongameli. Intloko yecawa ayikho enye ngaphandle kukaYesu Kristu ngokwakhe (Efese 1: 22-23).
Ibandla ngalinye lecawa likaKristu lizimela, kwaye liLizwi likaThixo elidibanisa kwiNyelelo Elinye (i-Efese 4: 3-6). Silandela iimfundiso zikaYesu Kristu nabapostile bakhe, kungekhona iimfundiso zomntu. SingamaKristu kuphela!
Sithetha apho iBhayibhile ithetha khona, kwaye sithula apho iBhayibhile ingathuli.
Iindaba ezilungileyo: Izixhobo ezintsha zeeNkonzo ze-Intanethi
Sifezile konke ukuphuculwa kwintanethi yethu kwaye sele sisandulise iwebhusayithi yethu entsha. Isakhelo esitsha se-intanethi senzelwe ukuzuza iicawa zikaKristu kunye nabo bonke abafuna indlela ephezulu kakhulu kuThixo. Izibonelelo zethu ezitsha ziya kubandakanya inani lezinto ezintsha kunye nezithuthukisi eziza kukhonza iicawa zikaKristu emhlabeni jikelele.
Izalathisi zethu zehlabathi zeeCawa ziye zaphinda zahlengahlengiswa kwaye ziya kubandakanya i-app yamahhala kuyo yonke i-Android Smart nee-smartphone ze-Iphone emhlabeni wonke.
Sinovuyo ngekamva yeecawa zikaKristu kwi-intanethi. Ndiyabulela ngako konke owenzayo kwisidiliya seNkosi. Uthando lwakho nenkxaso yobulungiseleli bethu iyaxabiswa kakhulu.
Nceda ukhumbule kwimithandazo yakho njengoko sisebenza ukuze sikwazi ukukhonza iicawa zikaKristu emhlabeni wonke. UThixo ulungile!